Abafana Namathoyizi! | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 24, 2006 NgoMsombuluko, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Angiqiniseki ukuthi kungakanani engingakuthatha! I-Internet Explorer 7, i-FIrefox 2, ne-MacBook Pro konke ngesonto elilodwa. Ngisemuva kokuphakelwa kwami ​​kwe-RSS ngama-posts angamakhulu ambalwa, ngemuva ku-imeyili yami ngama-imeyili angaba ngu-200… futhi nginomsebenzi omningi kunalokho engake ngaba nakho. Kwenzekani emhlabeni?
Okokuqala… I-Internet Explorer 7. Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngezinye izindawo zemenyu nokuhlelwa kwesikrini. Uma ungakaze usizame, isikrini esigcwele siyamangalisa. Futhi-ke, ukubeka amathebhu kuhle.
Okwesibili… Firefox 2. Ngisanda kuyilayisha. Impela uziphu! Ngiyayithanda. Angikaze ngihlole ukuhlolwa kokupela kodwa ngizwa ukuthi lokho kuyisici esihle. Lokho kusho ukuthi ngingalahla i-Google Toolbar.
Okwesithathu… ngiyacela… iMacBook Pro. Ngithole imisebenzi yalo mdlwane futhi ngishaywe umoya 'ngento epholile'. Vele, ngemuva kokuthi ngiyithengile, bekufanele ngiyothenga isikhwama esisha se-laptop ebesisihle futhi sibushelelezi. Ngisalinde ukuqapha i-monster emsebenzini… kepha esikhathini esingaphansi kwesonto, sengiguqulwe ngokuphelele.
Ngilayishe ukufana kuyo (WOW!) Ukuze ngikwazi ukusebenzisa i-XP lapho kufanele ngikwisikrini esisodwa (noma ewindini) naku-OSX kolunye. Lokho kuvele kungishayise ngomoya. Angicabangi ukuthi ngizoba yi-Windows Cripple isikhathi eside. Kufanele ngikutshele ngokubukeka nokuzizwa, i-OSX ithuthuke kakhulu ekubukeni, ekuzizweni nasekusebenzeni kahle. Angiyona i-Apple snob (okwamanje), kepha ngingathola ukuba yinye. Ngicabanga ukuthi okokuqala ngqa lapho ngiyivula eBorder, ngizoba ngomunye ngokusemthethweni!
Ezinye izinto engingazithandi nge-Mac? Intambo yamandla kazibuthe ipholile futhi konke, kodwa olunye uhlangothi luyamunca… lokho kungamandla amakhulu ka-ol 'clunky. Futhi baqinisa kakhulu intambo yokwandisa. Ukuklanywa okuningi ngezinyawo ezincane kangaka.
Amaphutha ama-5 abulalayo wokuphathwa kwemikhiqizo
Okthoba 25, 2006 ngo-6: 53 AM
Amakati nezinja zokuqala ezihlala ndawonye manje uDoug kwi-MAC?! Kwangathi kungelokothe ​​kube njalo!
Kuyahlekisa, izolo nje umklami wethu wezithombe (umfana we-MAC) noMqondisi wethu Wezinsizakalo ze-Intanethi (i-PC boy) babonile ukuthi empeleni bangubuciko bokulingisa impilo. Ikhodi yethu yokugqoka yasehhovisi yashintsha (ekugcineni) ukuze singadingi othayi. Ngosuku lokuqala lwemithetho emisha, umfana we-MAC weza ezosebenza engenathemba, kepha umfana we-PC wayegqoka uthayi noma kunjalo. BABA yi-Apple commercial.
Uma imemori isebenza, uDoug, uzizwa ubaluleke kakhulu ku-suite. Ngakho-ke lokhu kuncenga umbuzo, ingabe kungcono ukuzizwa ubalulekile, noma upholile?